Ny ‘Mpitsikilom-Bahiny’ Ihany No Mizara Tantaran’ny Fotoana Mahafinaritra Ao Etazonia, Hoy Ny Fitsarana Rosiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 20 Oktobra 2016 5:50 GMT
Ny “American Samara Alumni Club” nanatontosa flashmob iarahabana ireo Amerikana sy namana any amin'ny toerana rehetra misy azy any. YouTube
Ampy hilazana ny fikambanana sokajiana ho “mpitsikilom-bahiny” ao Rosia ny fampitan'ny media sosialy ny fiainana ao Etazonia, araka ny filazan'ny Fitsarana ao amin'ny Distrikan'i Lenin ao Samara. Tamin'ny Talata teo, nanohana ny fanapahan-kevitry ny Minisiteran'ny Fitsarana tamin'ny volana Aogositra ny fitsarana mba hampiditra ny “Fikambanan'ny Maintimolaly Amerikana” ao anatin'ny lisitr'i Kremlin amin'ny mpitsikilom-bahiny noho ny famoahana indray ireo tantara roa momba ny fiainana Amerikana tao amin'ny tranonkalan'ny media sosialy VKontakte. Namoaka didy ny fitsarana fa “hetsika ara-politika” ny famoahana indray ny momba izany, ary manitsakitsaka ny lalàna 2012 mitaky amin'ny vondrona mba hisoratra anarana ho mpiasam-bahiny [mpitsikilom-bahiny] raha toa ka mandray famatsiam-bola iraisam-pirenena izy ireo ary mandray anjara amin'ny sehatra ara-politika, teny nahazoana famaritana mihamidadasika hatrany, noho ireo lalàna sy fanapahan-kevitra ara-pitsarana vao haingana.
Midadasika loatra, raha ny marina, ka mety ho very ny dikan'ny teny taloha. Araka ny tatitra avy amin'ny tranonkala mpanandra-teny Open Russia, tsy nahavita nanazava tsara ny fitsarana Samara hoe inona tamin'ny lalàna no nohitsakitsahan'ny lahatsoratra navoakan'ny Fikambanana Maintimolalin'i Etazonia indray, fa nilaza fotsiny fa nampiditra “fitaovana ara-tantara momba ny fiainana ao Etazonia” izy ireo. (Mahaleotena ankehitriny ny vondrona VKontakte an'ny fikambanana.). Nampandoavin'ny fitsarana lamandy i Oleg Kokorev, filohan'ny fikambanana, lamandy mitentina 50.000 robla (790 dolara) ary nanasazy onitra 300.000 robla (4.740 dolara) ny fikambanana ihany koa, araka ny voalazan'ny andininy faha 19,34 ao amin'ny Fehezan-dalàna momba ny Fandikan-dalàna Ara-panjakana, “Manitsakitsaka ny asa nanirahana ny fikambanana tsy mitady tombontsoa, miasa ho mpiasam-bahiny.”
Fangon'ny fikambanan'ny Maintimolaly Amerikana. Sary: VKontakte.
Tamin'ny May 2016, nandany lalàna manazava ny atao hoe “hetsika ara-politika” ny parlemanta Rosiana, nanitatra ny famaritana ampidirana ny asa iombonana rehetra ho ao anatin'ny lalàna. Araka ny voalazan'ny lalàna vaovao, mahafaoka ny zava-drehetra ny hetsika ara-politika, manomboka amin'ny fiantsoana ny sampan-draharaham-panjakana izany ka hatramin'ny fandraisana anjara amin'ny asa mikendry hahazo vokatra amin'ny fifidianana iray. Mbola mivelatra ihany ny voalazan'ny lalàna, ahitana ireo ezaka fiantrana, fanabeazana, ary kolontsaina, ary hita ao koa ireo asa amin'ny sehatra hafa isan-karazany, ny fanesorana tsy ho ao anatin'izany no ahafahana mamaritra ny atao hoe hetsika ara-politika atao eo amin'ny kianja ara-politika tanteraka. Ara-politika ny zava-drehetra ao Rosian'i Putin.
Na dia nisy fiantraikany amin'ny fandikan-dalàna ara-panjakana aza ity lalàna ity, nanohy nandray fepetra mitovy amin'izany eo amin'ny tontolon'ny heloka bevava ny governemanta. Araka ny fandresen-dahatr'i Gleb Bogush, nanjary mivelatra be loatra ny lalàna Rosiana miady amin'ny fampihorohoroana ka lasa mahafaoka ireo karazana hetsika maro samihafa tsy misy idiran'ny fampihorohoroana: “nampiasa hatrany “ny ady amin'ny fampihorohoroana sy ny fihetsika mahery’ ny governemanta mba hanamarinana ireo lalàna mangeja, tsy maninona na dia mety tsy misy dikany aza izany. Vokatr'izany, azo ampiasaina tsara tsy hikendrena ireo fandrahonana azo itokisana ho fihetsika mahery ihany ny didy amam-pitsipika ao Rosia fa azo ikendrena ireo mpanohitra ny fanjakana ara-politika ihany koa.” Azo lazaina amin'ny lalànan'ny mpitsikilo vahiny ihany koa ny tahaka izany, izay mamela ny ONG ho azo iharan'ny haitraitran'ny fampanoavana sy ny minisitera.
Ny Fikambanan'ny Maintimolaly Amerikana, izay nitsangana tamin'ny taona 2001, dia mikendry hampivelatra ny fifandraisana ara-kolontsaina, ara-baovao sy ara-panabeazana miaraka amin'ireo fikambanana amerikana, ary manao asa soa ao amin'ny faritr'i Samara. Iray amin'ireo fikambanana 146 izay efa notondroin'ny Minisitry ny Fitsarana ho mpitsikilom-bahiny hatramin'ny taona 2012. Fikambanana maherin'ny 20 no nisafidy nanakatona ny varavaran'izy ireo toy izay hanaiky ny marika ho mpitsikilom-bahiny. Vao haingana indrindra, tamin'ny 4 Oktobra, nahazo ny marika mpitsikilom-bahiny ny Fikambanana Fahatsiarovana, iray amin'ireo fikambanana tsy mitady tombontsoa malaza indrindra sy manana tara-pamirapiratana indrindra ao Rosia izay mikatsaka ny fitahirizana ny fahatsiarovana ireo niharam-boinan'ny komonisma sy hamaritra mazava tsara ny fanitsakitsahana ny zon'olombelona natao tao amin'ny Firaisana Sovietika. Nilaza ireo mpiaro ny zon'olombelona fa ny lalàna tamin'ny 2012 dia ampahany amin'ny ezaka goavana nataon'i Kremlin hamoretana ny mpanohitra sy ny fiarahamonina sivily ao Rosia. Araka ny filazan'ny Mpanaramaso ny Zon'olombelona, [HRW] “Ao anatin'ny kifafam-pamoretana hanampenam-bava ireo feo mitsikera izany ka nampidirana famerana vaovao amin'ny aterineto, ny fahalalahana maneho hevitra, ny zon'ny vavy tia vavy, ny lahy tia lahy, ny sady tia lahy no tia vavy ary ny nanova taovam-pananahana (LGBT), ary ireo fahalalahana fototra hafa. “